Ozi kacha ọhụrụ banyere Minista FCT si Nigeria & ụwa | TAA
Ndi nnochite anya choro maka imuputa President Buhari
UNICEF: Kebbi n'etiti 10 na-ekwu na ọnwụ ụmụaka kachasị dị elu na ...
Amnesty na-ebo Turkija ebubo na ọ na-eji ọnọdụ nke mberede eme ihe megide 'mmegide'
Ex-Minista Okonjo-Iweala na-akwado ego pụrụ iche maka ndị na-akwado nrụrụ aka
Home Tags Minista FCT
Egwuregwu N1.1: EFCC kwuru akụkọ ọgụgụ isi kpaliri nwa nwoke nke FCT
Onye na-agba àmà, Mr Ishaya Dauda, ​​na Tuesday gwara Ụlọikpe Ukwu Federal, Abuja, na ikpe nke onye bụbu onye ụkọchukwu FCT Minister Bala Mohammed nwa, Samsudeen kpaliri akụkọ nyocha.
Lai Mohammed: UNWTO-CAF ga-etinye Nigeria n'ilekọta ụwa dum
Nkwekota UNNTOXst UN World Tourism Organisation Commission for Africa (UNWTO - CAF) na June, site na June 61 ruo June 1, ga-etinye Nigeria n'okpuru ụwa niile na-elekwasị anya na ya akụ na ụba enweta.
Gomenti gọọmentị na-edebanye aha ndị ọzọ a na-ekwu na ha ga-eburu ya
Gọọmenti etiti gọọmentị ewepụtawo aha ndị ọzọ na-ekwu na ha nwere ego na ụlọ akụ ahụ n'oge ọchịchị Goodluck Jonathan.
Ndị nnọchianya nke ndị isi na-eleta Bauchi ka ha nwụọ karịa Senator Wakili
Otu ndi gọọmenti gọọmenti etiti na Sunday gara Bauchi ka ha na ndi ochichi obodo na Ali Wakili (APC) megharia, onye isi oche nke nochite anya Bauchi South, onye nwuru na Saturday.
Ndị uweojii na-ejide mmadụ na-abụrụ onye ọrụ FCT ka ọ na-akpagbu ọha na eze
Ndị uweojii ejidewo onye a na-enyo enyo, Terhemba Tsuum, maka onye na-abata Minista FCT, Malam Muhammad Musa Bello, na ịkatọ ọha mmadụ na-enweghị atụ maka N38 nde.
Minista Muhammad Bello kwadoro ụlọ ọrụ maka nhazigharị ụgbọala ndị a gbahapụrụ, na-echekwa N225m
Minista FCT, bụ Malam Muhammad Bello, jara ọrụ nlekọta nke Management Council Metropolitan Management maka ịmeghachiri ụgbọala na ígwè ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ karịa ịzụta ndị ọhụrụ.
Minista Muhammad Bello na-agba ndị na-azụ anụ, ndị ọrụ ugbo ume izere ime ihe ike
Mgbe ndị ọrụ ugbo na-azụ anụ na ndị na-azụ anụ na mpaghara ụfọdụ nke mba ahụ, Minista FCT, Malam Muhammad Musa Bello, akpọwo ndị ọrụ ugbo na ndị ọrụ anụ ụlọ na FCT iji wepụ ihe ike ma bie ndụ n'udo na nkwekọrịta site n'igosi nghọta na ịhụnanya maka ibe ha .
Minista: Anyị edebewo nkwa anyị nye ndị bi na FCT
Minista FCT, Malam Muhammad Bello, kwuru na ụlọ ọrụ Federal Capital Territory (FCTA) ugbu a emezuwo nkwa niile e nyere ndị Niger na ndị bi na FCT, mgbe ọ bịara n'ụgbọ.
FEC kwetara $ 6.7 maka ọrụ ụgbọ okporo ígwè Ibadan-Kaduna
Onye isi ochichi obodo, FEC, kwadoro ihe ncheta nke Minista Transportation, Rotimi Amaechi, nyere maka iwu nke uzo site na Ibadan, Oyo State, Kaduna.
2019: Ndị isi obodo na-aga n'ihu megide President Obasanjo
Ndị na-akwado ndị na-eketa oke ugwu na Saturday na-agba otu ìgwè - Òtù Nchịkwa Ọchịchị Maka Ọchịchị (NPLF) - iji mee ka mpaghara ahụ nwee ike iji aka ya na-aga n'ihu nhoputa nke afọ ọzọ, karịsịa nchịkọta ntuli aka.
Nsogbu Bwari: Chieftaincy tussle, okpukpe adịghị akpata nsogbu - Musa Dikko
Onye isi oche, Bwari Council Council, FCT, Mr Musa Dikko, na Thursday kwuru na ụbọchị Krismas na-eme ihe ike na district enweghị obi abụọ okpukpe.
FCTA jiri ugo N9.6 mee ihe na oru 2017 - Senator Maina
Ụlọ ọrụ Federal Capital Territory (FCTA) ekwuola na ọ na-eji ihe karịrị N9.6 ijeri arụ ọrụ mmepe na akụkụ nke Federal Capital Territory (FCT), na 2017.
Gọọmentị Federal kwadoro N155bn maka ọrụ ụgbọ okporo ígwè Abuja-Kaduna-Zaria-Kano
Gọọmenti etiti gọọmenti akwadola ọrụ ụgbọ okporo ígwè ndị gụnyere Abuja-Kaduna Zaria na Kano na ego N155.7 ijeri.
Anyị ga-agbapụta ala ndị agha Nigeria na FCT - onye ozi
Ndi ochichi nke FCT na-ekwu na ala nke agha Naijiria n'ugwu a ghaghachitere.
Onye bu SGF bu Gidado Idris ji lie na Abuja
Onye odeakwụkwọ odeakwụkwọ nke Gọọmenti Federation (SGF), Gidado Idris, onye nwụrụ na Friday Friday na Abuja, e liri ya na Gudu Cemetery na FCT na Satọdee na anya mmiri na ekpere sitere n'aka ezinụlọ na obodo Muslim.
VP Yemi Osinbajo na-eleta obodo Adamawa agbapụla
Onye isi oche Yemi Osinbajo gara leta ọtụtụ obodo na obodo nta dị na Adamawa na Tuesday na mmegide ime obodo na-eme n'oge na-adịbeghị anya, nke dugara igbu mmadụ na mbibi nke ihe onwunwe.
N'ihi na ị chọghị ntinye aka na United States tupu e wepụ ihe nde dollar 496 maka ịzụta ụgbọ elu sitere na United States, ụfọdụ ndị nnọchiteanya akpọwo maka imeri nke President Muhammadu Buhari.
UNICEF: Kebbi n'etiti 10 na-ekwu na ọnụọgụ nwatakịrị kachasị elu na Nigeria
Òtù Mba Ndị Dị n'Otu nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNICEF) kwuru na nke 36 States na Nigeria, Kebbi State nọ n'etiti 10 kachasị elu karịa afọ ise ọ bụla nwatakịrị na-anwụ kwa afọ.
Turkey kwesịrị ịkwụsị iji ọnọdụ ọnọdụ mberede ya na-aga n'ihu dị ka ntụrụndụ maka ikpochi ndị na-akwado ihe ndị ruuru mmadụ, ndị nta akụkọ na ndị isi obodo, ka Amnesty International kwuru na akụkọ a wepụtara na Thursday.
Onye isi ahia nke Naijiria, bụ Ngozi Okonjo-Iweala, na-eduga ịkwado maka ego pụrụ iche ka a kwadoro maka ndị na-alụ ọgụ na nrụrụ aka.
Mo Salah na-akwado onye na-elekọta ndị na-ahụ maka ihe oyiyi oyiyi nke Egypt FA
Mohamed Salah akwadowo onye na-elekọta ya Ramy Abbas n'usoro ya na Njikọ Football nke Egypt na ihe oyiyi ikike nke kpakpando Liverpool
Ekiti guber: 33 APC na-achọ inweta ụdị
Mmadụ iri atọ na atọ na-agba ndị omempụ nile (APC) azụla aha na nnọchianya nke ụdị mmasị iji kwado maka gọọmentị n'elu ikpo okwu nke nnọkọ ahụ.
Cristiano Ronaldo na-eziga Marcus Rashford uwe elu
Marcus Rashford kelere Cristiano Ronaldo maka iziga ya uwe elu Real Madrid.
General Gowon: Nsogbu nchedo Nigeria nwere nsogbu
Onye isi oche nke mbụ, Gen. Yakubu Gowon, ekwuola na ọ bụ ihe nhụsianya nke nsogbu nchebe na igbu ọchụ na mba ahụ.
Senator Saraki kwusara N10.4 nde ndi ndu nwanyi Kwara
Onye isi ochichi Senate, Dokita Bukola Saraki na Sunday kwusara N10.4 nde ndi isi umuaka nke umuaka NNNXX (APC), na Kwara.